संचारकर्मी देशराज नेम्बाङको ‘उदासै छ कि.. तिम्रो चै संसार कसरी चल्दैछ’ सार्वजनिक - Purwanchal Daily
जेष्ठ नागरिक ग्रामको गुरु योजनाबारे छलफल
सडकमा सवारी अनुगमन तीव्र
३ आश्विन २०७७, शनिबार १५:२७ मा प्रकाशित
विगत लामो समय देखि विभिन्न लघु चलचित्र निमार्ण गर्दै सामाजिक सचेतना अभियानमा सरिक हुदै आएको मौलिक टिभी युनिटले यसपटक म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ ।
संचारकर्मी देशराज नेम्बाङको शब्दमा रहेको ‘उदासै छ कि.. तिम्रो चै संसार कसरी चल्दैछ’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको हो । बरिष्ठ संगीतकार विशाल राईको संगीत एवं गायिका इन्द्र कुमारी सम्बाहाङफेको स्वरमा रहेको सो गीतको म्यूजिक भिडियो निरन राईको निर्देशन, छायाङकन र सम्पादन निर्माण भएको हो ।
जीवनका विभिन्न बाध्यता र विवशताले छुटिनु परेको मायालु जोडिले आफ्नै घरगृहस्थी चलाई रहेपनि मायालुको सम्झनामा कसरी पीडा हुन्छ ? भन्ने कुरा उजागर गर्न खोजीएको यस म्यूजिक भिडियोमा कलाकारहरु देशराज नेम्बाङ, गंगा लिम्बु, सुरज जबेगु, सुमी जंग राना र दियाना आङ्देम्बे फियाकको अभिनयमा बनेको छ । सो म्यूजिक भिडियो तलको लिङ्कमा हेर्न सकिनेछ ।
संचारकर्मी देशराज नेम्बाङको शब्दमा रहेको ‘उदासै छ कि.. तिम्रो चै संसार कसरी चल्दैछ’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको हो ।
बरिष्ठ संगीतकार विशाल राईको संगीत एवं गायिका इन्द्र कुमारी सम्बाहाङफेको स्वरमा रहेको सो गीतको म्यूजिक भिडियो निरन राईको निर्देशन, छायाङकन र सम्पादन निर्माण भएको हो ।
जीवनका विभिन्न बाध्यता र विवशताले छुटिनु परेको मायालु जोडिले आफ्नै घरगृहस्थी चलाई रहेपनि मायालुको सम्झनामा कसरी पीडा हुन्छ ? भन्ने कुरा उजागर गर्न खोजीएको यस म्यूजिक भिडियोमा कलाकारहरु देशराज नेम्बाङ, गंगा लिम्बु, सुरज जबेगु, सुमी जंग राना र दियाना आङ्देम्बे फियाकको अभिनयमा बनेको छ ।
सो म्यूजिक भिडियो तलको लिङ्कमा हेर्न सकिनेछ ।
Previous articleसंविधान दिवस र गणतान्त्रिक चेतनाको विकास
Next articleमोटरसाइल चोरीमा संलग्न पाँच जना पक्राउ